DEG DEG Turkiga oo Ku Dhawaqay War Culus Somaliya Xilka Qaadis Khayre,15 Kun Askari Tababar | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa soo maray guul weyn sanadihii la soo dhaafay, iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyaddooda iskaashi, Turkigu wuxuu tababar siiyay saddex-meelood meel ciidamada militariga Soomaaliya.
Danjiraha Turkiga ee Muqdisho Mehmet Yılmaz ayaa u sheegay wakaaladda wararka Anadolu (AA) hadallo la xiriira xiriirka laba geesoodka ah, “Marka aan eegno tirada guud, Turkigu wuxuu tababar siin doonaa saddex-meelood meel ciidamada milatariga Soomaaliya, oo lagu qiyaaso inay gaarayaan 15,000-16,000 oo shaqaale ah.”
Ka sokow iskaashiga milatariga, Yılmaz wuxuu sidoo kale taabtay qaybaha kale ee iskaashiga waddamada, oo ay ku jiraan caafimaadka iyo waxbarashada.
Wakiilka ayaa hoosta ka xariiqay in xiriirka taariikhiga ah ee ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya uu dib u soo noqdey sannado badan laakiin uu bilaabay inuu horumar dheeraad ah sameeyo kadib booqasho rasmi ah oo Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ku yimid Muqdisho sanadkii 2011, xilligaasoo dalku la halgamayay abaar.
Y Thelmaz ayaa yiri “Booqashada madaxweynahaya ee 2011 ee Soomaaliya waxay wax ka beddeshay masiirka dalkan, waxayna xiriirka labada dal u horseeday heer cusub,” ayuu yidhi Yılmaz. Wuxuu sheegay in Soomaaliya “ay ku soo dhacday meeshii ugu hooseysay” ka dib booqashadii Madaxweyne Erdo ,an, isaga oo xusay in ay u duceynayaan dadka Soomaaliyeed iyo Turkiga.
Isagoo hoosta ka xariiqaya in Erdo becamean uu noqday “hoggaamiye keli ah oo aan Afrikaan ahayn oo soo booqda Soomaaliya muddo 20 sano ah,” safiirku wuxuu sheegay in farriinta midnimada Erdogan ay heshay farxad shacabka Soomaaliyeed.
Danjiraha ayaa intaas ku daray in Turkiga ay sii wadayso taageerada ay siiso Soomaaliya iyada oo la siinayo gargaarka bini’aadannimo iyadoo loo eegayo baahiyaha dalka ka jira ee hadda jira, dhinacyada caafimaadka, waxbarashada iyo amniga.
‘Iskaashiga milatari ee Turkiga uu la leeyahay Soomaaliya waa mid aad muhiim u ah’
Isaga oo ka hadlaya iskaashiga milatari ee ka dhexeeya labada dal, Yılmaz wuxuu yidhi ku lug lahaanshaha Turkiga ee Soomaaliya waa “muhiimad aad muhiim u ah.”
“Iskaashiga milatari ee Turkiga uu la leeyahay Soomaaliya waa mid muhiimad weyn u leh dalkan. Waxay gacan ka geysaneysaa amniga Soomaaliya iyo la-dagaallanka argagaxisada, ”ayuu yidhi.
Isagoo ku nuuxnuuxsaday in rajooyinka ugu weyn ee bulshada caalamku ka qabto Soomaaliya ay tahay tababarka cutubyo xaqiijin doona amniga dalka, wuxuu xusay doodaha la xiriira suurtagalnimada ka bixitaanka ciidamada Howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) dalka.
“Bixitaanka ciidamada AMISOM ayaa laga doodayaa maalmahan. Xaqiiqdii, Qorshaha Kala-guurka Soomaaliya, oo loo adeegsaday inuu hago dadaallada dib-u-dhiska ee ay dowladdu waddo, ayaa sidoo kale saadaaliyay tan. Marka loo eego baaxadda, sanadkii hore iyo sannadkan tirada ciidamada AMISOM waxaa hoos loo dhigay 2,000. Laakiin xaqiijinta qorshahan ayaa kuxiran abuuritaanka ciidamada nabadgelyada maxalliga ah ee Soomaaliya, ”ayuu yiri Yzlmaz.
“Waxaan si cad u dhihi karaa waddanka ku deeqa tabaruca ugu tayada sarreeya waa Turkiga,” ayuu yidhi.
Isagoo sheegay in askarta iyo saraakiisha aan la wareegin, ee iyagu laf dhabar u noqon doona millatariga Soomaaliya, lagu tababarayo xerada TURKSOM, jaamacad difaac iyo saldhig millatari oo Turkiga ah, safiirku wuxuu intaas ku daray in tababarka lasiiyay uu yahay tababar tayo sarre leh.
Markii ugu horreysay waxay ku bartaan af-soomaaliga. Intaa ka dib, waxaa loo diraa gobolka Isparta (gudaha Turkiga) si ay tababar ugu qaataan. Markii ay dhamaato, waxaa loo wareejiyaa milatariga Soomaaliya, ”ayuu yiri Yılmaz.
Yılmaz wuxuu intaas ku daray in Turkey ay ku guuleysatay inay ka adkaato oo ay xakameyso faafitaanka coronavirus ee ka dhacay saldhig millateri, in kasta oo ay sii wadayso bixinta tababarka. Danjiraha ayaa sheegay in ugu yaraan 1,000 sarkaal oo booliis ah oo gaar ah ay tababari doonaan Turkiga.
Wakiilka ayaa sidoo kale taabtay dagaalka ka dhanka ah kooxda Glenlen argagixisada (FETÖ) wuxuuna sheegay in Soomaaliya ay tahay waddankii ugu horreeyay ee joojiya howlihii FET ka dib isku day afgambi oo dhacay July 15.
Yılmaz wuxuu kaloo amaaney dadaalka Mu’asasada Maarif ay ku xoojineyso waxbarashada dalka Afrikada.
“Maarif shaqo wanaagsan ayuu ka qabtay Soomaaliya. Mu’asasada ayaa sameyneysa dadaallo lagu horumarinayo labada iskuul ee ay la wareegtay halkan. Iskuuladan ayaa baahi weyn loo qabaa. Waxa kale oo jira Iskuul kale oo Maarif ku qaatay Somaliland sidoo kale. Macallimiintayadu way guuleysteen, ”ayuu raaciyay.
Yılmaz wuxuu kaloo beeniyay eedeymaha ah in Turkiga uu askar ka dalbaday Soomaaliya dadaallada ay ugu jiraan sidii ay gacan uga siin lahaayeen dowladda la aqoonsan yahay ee Liibiya ee loo yaqaan ‘National Accord’ (GNA) ee dagaalka ay kula jirto xoogagga mucaradka ah ee Gen. Khalifa Haftar.
“Warbaahinta bulshada waa mid aad u awood badan gudaha Soomaaliya. Waxaan la soconaa dadaallada wadamada qaar ay ugu adeegsanayaan aaggaga danahooda. Waxaan u aragnaa tan inay tahay dadaal bartilmaameed ah. Eedeymahaasi maahan run. Wax run ah kama jiraan sheegashadan, ”danjiraha ayaa yiri.
Previous articleAqalka Sare ee Kenya oo maanta ka doodi doono dhaqaalaha la siiyo deegaano ay ku jiraan kuwa Soomalida
Next articleDeegaan ka tirsan gobolka Sool oo lagu sii qul qulaya & Waftiyo gaadhay